Wariye ka tirsan warbaahinta Qaranka oo ku guuleystay abaalmarinta sanadlaha ah ee Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wariye ka tirsan warbaahinta Qaranka oo ku guuleystay abaalmarinta sanadlaha ah ee...
Wariye ka tirsan warbaahinta Qaranka oo ku guuleystay abaalmarinta sanadlaha ah ee Muqdisho.
Wariye Cabdulqaadir Ciise Cali oo ka tirsan warbaahinta Qaranka ayaa ku guulaystay caawa abaalmarinta sida sanadlaha ah loo bixiyo ee lagu abaalmariyo shaqsiyaadka iyo hay’adaha kale ee bulshada wax u qabtay, waxaana isaga lagu xushay hawlkarnimadii uu shaqada warbaahinta ka sameeyey 12-dii bilood ee ugu dambaysay.
Abaalmarintan waxaa hore ugu guulaysatay wariye Nasra Bashiir Cali oo warbaahinta Qaranka ugasoo waranta xafiiska Ra’iisal wasaaraha dalka.
Previous articleWasiirka waxbarashada Galmudug oo booqday iskuulka Bangeelle oo dhawaan carruur ay ku geeriyoodeen+Sawirro.
Next articleWasiiru dawlaha cusub ee Madaxtooyada Qaranka oo xilka la wareegay +Sawirro.